စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ် ဖန်တီးခြင်း (၂) (improving your writing skill) - Myanmar Network
စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ် ဖန်တီးခြင်း (၂) (improving your writing skill)
Posted by Learner on July 28, 2013 at 16:19 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကို အများအားဖြင့် ဘောင်တစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ စိတ်ကူးအယူဆတစ်ခု သို့မဟုတ်
အဆိုပြုချက်တစ်ခုနဲ့စတင်လေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ဆက်လက်ပြီး ရှင်းလင်းချက်ပေးတာ၊ အသေးစိတ်သရုပ်ဖော်တာ၊ သို့မဟုတ်ရင် ဥပမာ၊ သက်သေအထောက်ထားတွေနဲ့ ခိုင်မာအောင်လုပ်တာတို့ကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဒီလိုစာပိုဒ်ကို အကျယ်ချဲ့ရေးသားရာမှာ တစ်ပိုဒ်လုံးရဲ့အဓိကဆိုလိုချက်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ စာကြောင်းတွေပါဝင်လာတဲ့အခါ စာပိုဒ်ဟာ အင်အားချည့်နဲ့သွားတော့တာပါဘဲ။ဒီလိုစာကြောင်းတွေဟာ မဆီလျော်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်လက်များ သို့မဟုတ် မူလဦးတည်ချက်မှ လွဲချော်စေသော စာကြောင်းများဖြစ်နေတတ် ပါတယ်။ အောက်မှာ ဥပမာစာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ ဒီစာပိုဒ်မှာ မဆီလျော်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်လက်အချို့ပါဝင်နေပါတယ်။
ဒီစာပိုဒ်အတွင်းမှာ စာကြောင်းတိုင်းဟာ cherry tree နဲ့ သက်ဆိုင်နေတာချည်းပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ သေချာဂရုစိုက်ကြည့်ရင် စာပိုဒ် ရဲ့အဓိကအကြောင်းရာက enjoyment of cherry tree ဖြစ်လို့ စာပိုဒ်ကို အသေးစိတ်သရုပ်ဖော်ရာမှာမှင်အနီရောင်နဲ့ပြထားတဲ့ စာကြောင်း
နှစ်ကြောင်းဟာ မသက်ဆိုင်ဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ စာပိုဒ်အတွက်တော့ မဆီလျော်တဲ့
နောက်ထပ်ဦးတည်ချက် သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိဘဲပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ စာပိုဒ်မျိုး ကိုလေ့ လာကြည့်ပါဦး
1It isafact that capital punishment is notadeterrent to crime. 2Statistics show that in states with capital punishment, murder rates are the same or almost the same as in states without capital punishment. 3It is also true that it is more expensive to putaperson on death row than in life imprisonment because of the costs of maximum security. 4Unfortunately, capital punishment has been used unjustly. 5Statistics show that every execution is ofaman and that nine out of ten are black. 6So prejudice shows right through.
ဒီစာပိုဒ်မှာလည်း စာကြောင်းအားလုံးဟာ capital punishment နဲ့သက်ဆိုင်တာချည်းပါဘဲ။ ဒါ ပေမဲ့ ဒီစာပိုဒ်ရဲ့ ဦးတည်ချက်ဟာ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ စာပိုဒ်ဟာ စစချင်း
ရှင်းလင်းတဲ့အဆိုပြုချက်တစ်ခုနဲ့စတင်ထားပါတယ်။ ''သေဒဏ်စီရင်အပြစ်ပေးခြင်းဟာ ရာဇ၀တ်
မှုတွေကို လျော့နည်းသွားအောင် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မှန်ကန်တဲ့အချက်လက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်"
ဒုတိယစာကြောင်းကတော့ ဒီအဆိုပြုချက်ကို သက်သေပြထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တတိယစာ
ကြောင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ သေဒဏ်စီရင်အပြစ်ပေးခြင်းနဲ့ ရာဇ၀တ်မှုလျော့နည်း
စေခြင်းအကြောင်းရာကနေ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားခြင်းရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဆီသို့ ဦးတည်ချက်
ပြောင်းသွားပါတယ်။ တစ်ခါ လေးကြောင်းမြောက်ကို ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ တရားမျှတခြင်း
ပထမစာကြောင်းက ဦးတည်ခဲ့တဲ့ သေဒဏ်စီရင်ခြင်းနဲ့ ရာဇ၀တ်မှု လျော့နည်းခြင်းအကြောင်း
အောက်ပါစာပိုဒ်ကတော့ အထက်က အလားတူအကြောင်းရာကိုဘဲ ပိုမို စနစ်ကျပြီး ဦးတည်ချက်
တစ်ခုရဲ့အောက်မှာ အသေးစိတ်အချက်လက်များ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်များနဲ့စုစည်းထားတဲ့
1The punishment of criminals has always beenaproblem for society. 2Citizens have had to decide whether offenders such as first-degree murderers should be killed inagas chamber, imprisoned for life, or rehabilitated and givenasecond chance in society. 3Many citizens argue that serious criminals should be executed. 4They believe that killing criminals will set an example for others and also rid society ofacumbersome burden. 5Other citizens say that no one has the right to takealife and that capital punishment is notadeterrent to crime. 6They believe that society as well as the criminal is responsible for the crimes and that killing the criminal does not solve the problems of either society or the criminal.
ပထမစာကြောင်းမှာ စာပိုဒ်ရဲ့ဦးတည်ချက်ဖြစ်တဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း
ပြဿနာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒုတိယစာကြောင်းမှာတော့ အဆိုးဝါးဆုံးပြစ်မှုများကိုကျူးလွန်
သူများကို ချမှတ်နိုင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုတင်ပြထားပါတယ်။ တတိယစာကြောင်းကတော့လူအများ
ဖော်ပြထားပါတယ်။ ငါးကြောင်းမြောက်မှာတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်ကိုဖော်ပြထားပြီးနောက်
ဆုံးစာကြောင်းကတော့ ၎င်းအမြင်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီစာပိုဒ်
ဟာ ဦးတည်ချက်တစ်ခုတည်းရဲ့အောက်မှာ စနစ်တကျစုစည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ စာကြောင်း
အပေါ်မှာ ဥပမာအဖြစ်တင်ပြခဲ့တဲ့ စာပိုဒ် သုံးပိုဒ်စလုံးဟာ ဦးဆောင်ဝါကျလို့ခေါ်တွင်တဲ့ စာပိုဒ်
တစ်ပိုဒ်ရဲ့အဓိကဆိုလိုရင်းကိုဖော်ပြတဲ့ ၀ါကျတစ်ကြောင်းစီနဲ့စတင်ထားကြပါတယ်။ စာပိုဒ်
တစ်ပိုဒ်ရဲ့ဦးဆောင်ဝါကျမှာ တစ်ပိုဒ်လုံးကိုအနှစ်ချုပ်ထားတဲ့ အဆိုပြုချက်သို့မဟုတ် အယူဆတစ်
ခုပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ စာပိုဒ်ရဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့ဝါကျများကတော့ ဒီ ဦးဆောင်ဝါကျ ရဲ့ဆိုလိုချက်ကို
အသေးစိတ်ရှင်းလင်းခြင်း၊ သရုပ်ဖော်ခြင်း၊ ဥပမာ၊ သက်သေအထောက်ထားများဖြင့်ခိုင်မာစေ
ခြင်းဖြင့် စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကို ဖန်တီးထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဦးဆောင်ဝါကျ topic sentence ဟာ
ကြောင်းရဲ့နောက်မှာရှိနိူင်သလို တစ်ခါတစ်ရံ စာပိုဒ်နောက်ဆုံးမှာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ဦးဆောင်ဝါကျ ဟာ စာပိုဒ်ကိုစုစည်းပေးတဲ့ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်သလို စာပိုဒ်တိုင်း
မှာလည်း ဦးဆောင်ဝါကျမပါ ပါဘူး။ ဥပမာ သရုပ်ဖော်စာပိုဒ်၊ ဇာတ်ကြောင်းပြောစာပိုဒ်များနဲ့
စမ်းသပ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခု တစ်ဆင့်ချင်းပြုလုပ်ကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြတဲ့စာပိုဒ်များမှာ ဦး
ဆောင်ဝါကျပါလေ့မရှိပါဘူး။ သို့သော်လည်း ဦးဆောင်ဝါကျဟာ အယူအဆတစ်ခု အတွေးအမြင်
တစ်ခုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အခြေအတင်ငြင်းခုံဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့ သို့မဟုတ် အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းဝေဖန်မှု
ကိုဖော်ပြတဲ့စာပိုဒ်များမှာ အလွန်အကျိုးဖြစ်စေတဲ့ ၀ါကျဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဦးတည်ချက်
တစ်ရပ်ကို သွေဖယ်မသွားအောင် ဦးဆောင်ဝါကျကထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
မှာဆက်လက်လေ့လာကြည့်ပါ။ Rachel Carson ရဲ့ Silent Spring ကစာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ဖြစ်ပါ
ဦးဆောင်ဝါကျရဲ့ ပထမပိုင်းဖြစ်တဲ့ Soon after the spraying had ended ဆိုတာဝါကျပိုင်း
ဟာရှေ့စာပိုဒ်ရဲ့ အဆက်စပ်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ topic sentence အများစုမှာ ဒီလို ရှေ့စာပိုဒ်ကို ပြန်လည်ဆက်စပ်မှုယူတဲ့ဝါကျပိုင်းတွေနဲ့စတင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
နောက်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ there were unmistakable signs that all was not well ကတော့ စာပိုဒ်ရဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြမဲ့အပိုင်းကို ဦးတည်ပေးလိုက်တဲ့ အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်...။ ကျန်ရှိတဲ့ စာကြောင်းများကတော့ ဦးဆောင်ဝါကျကို အသေးစိတ် ထပ်မံသရုပ်ဖော်တဲ့အချက် လက်များ သာဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးဆရာမဟာ နောက်ပိုင်းမှာ All the life of the stream was stilled.
ဆိုတဲ့ ၀ါကျနဲ့လည်း သူမရဲ့ ဦးဆောင်ဝါကျက ထိန်းကျောင်းတဲ့အကြောင်းရာကို ပိုမိုပိုလွန်စေ
ပြန်ပါတယ်။ အလွန်လှပသေသပ်တဲ့ စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by Mr. Soap on July 29, 2013 at 14:06
Thank you Ko Oakkar :)
Permalink Reply by Learner on July 29, 2013 at 19:02
Thanks, dear brother!!
Permalink Reply by venus on August 10, 2013 at 15:55